नागरिक एपबाट केही मिनेटमै यसरी लिनुहोस् प्यान नम्बर - ई-फारबेष्ट.com
Posted on May 6, 2021 May 6, 2021 Author ई-फारवेष्ट.com	Comments Off on नागरिक एपबाट केही मिनेटमै यसरी लिनुहोस् प्यान नम्बर
काठमाडौं । सरकारले हालै पूर्ण संस्करणकाे नागरिक एप सार्वजनिक गरेकाे छ । सम्भव भएसम्मका सबै सार्वजनिक सेवा एपबाट दिने उद्देश्यले ल्याइएकाे नागरिक एपलाई सरकारले डिजिटल नेपालकाे ‘गेम चेन्जर’ काे रूपमा लिएकाे छ ।
हाल याे एपबाट स्थायी लेखा नं., प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, मालपाेत, स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड, शैक्षिक विवरण, नागरिक लगानी काेष, सञ्चय काेष, सामाजिक सुरक्षा काेष, हेलाे सरकार, नागरिकता र राहदानी मतदाता परिचयपत्र लगायतका सेवा प्रदान गरिएकाे छ ।
सरकारले यसअघि परीक्षणकै चरण (बेटा भर्सन) मा सार्वजनिक गरेकाे नागरिक एपमा स्थायी लेखा नं. (प्यान नम्बर) दर्ता गर्ने सुविधा दिएकाे थियाे ।
नागरिक एपबाट प्यान दर्ता कसरी गर्ने ?
एप प्रयोग गर्न तपाईंले सुरुमा आफ्नै नाममा रहेको मोबाइल नम्बरबाट यो एपमा खता खोल्नुपर्ने हुन्छ । (एपमा खाता खोल्ने तरिका थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
अब सुरुमा नागरिक एप खोल्नुहोस् । नागरिक एपबाट प्यान लिन तपाईंले आफ्नो नागरिकता विवरण पुष्टी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि नागरिकता लेखिएको स्थानमा थिच्नुहोस् । त्यसको नम्बर, जारी भएको जिल्ला, जन्म मिति र जारी भएको मिति उल्लेख गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् ।
तपाईंले उल्लेख गरेको विवरण र गृह मन्त्रालयमा भएको विवरण मिलेको खण्डमा नागरिकता विवरण तत्कालै प्रमाणीकरण हुन्छ । यदि तपाईंले नागरिक एपमा खाता खोल्ने क्रममा नै नागरिकता विवरण भरिसक्नुभएको छ भने यो प्रक्रिया दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन ।
अब प्यान लेखिएको स्थानमा थिच्नुहोस् र त्यसको अन्तिममा रहेको प्यान दर्ता गर्नुहोस् लेखिएको स्थानमा दबाउनुहोस् ।
त्यसपछि आफूलाई पायक पर्ने राजस्व कार्यालय छान्नुहोस् र पुनः अगाडि बढ्नुहोस् । अब त्यहाँ तपाईंले एपमा प्रमाणीकरण गराइसकेका विवरणहरु स्वतः भरिएर आउनेछन् ।
यति गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो पासपोर्ट आकारको तस्वीर खिच्नुहोस् । तपाईंको मोबाइलमा यस अघि नै तपाईंको पासपोर्ट आकारको फोटो छ भने त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
अब व्यक्तिगत विवरणको सुरुमा रहेको तस्वीरको संकेतमा थिचेर मोबाइलमा रहेको आफ्नो पासपोर्ट आकारको फोटो अपलोड गर्नुहोस् ।
फाराममा छुटेका सबै विवरण थप्नुहोस् र गलत विवरण सच्याएर अगाडि बढ्नुहोस् ।
यति गरेसँगै तपाईंको निवेदन तयार भयो । अब अन्तिममा दायाँतर्फ रहेको बुझाउनुहोस् लेखिएको स्थानमा दबाउनु भयो भने तपाईंको प्यान दर्ता प्रक्रिया पुरा हुन्छ र एपमै आफ्नो प्यान कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ ।
चैत २० अछाम मेल्लेख गाउँपालिका सामाजिक भौगोलिक हिसाबले पिछडिएको र दुर्गम क्षेत्रमा परे पनि निकै सम्भावना बोकेको पालिका हो। यधपी भौगोलिक सामाजिक चुनौतीको सामना गर्दै सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रगोग गरी सुशासन,पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि नविनतम प्रयास गर्न अघि सरेको छ । विश्व सूचना प्रविधिको तिब्र गतिमा कुदिरहेको यस आधुनिक युगमा सरकारले पनि जनता सामु सूचना […]
आईसीटी जनशक्ति विकास गर्न सञ्चार मन्त्रालयले त्रिविसँग सहकार्य गर्ने।
Posted on January 31, 2021 January 31, 2021 Author ई-फारवेष्ट.com
काठमाडौं । आईसीटीमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवामाथि बिहीबार सिंहदरबारमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले यस किसिमको योजना सुनाएका हुन् । ‘आईसीटीमा आवश्यक जनशक्ति बढाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने विषयमा विचार गरिरहेका छौं,’ उनले भने । मन्त्री […]
Technology प्रविधि समाचार
अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीले बनाए गज्जबको एप, सीप हुनेलाई स्वरोजगार बनाउने
Posted on September 6, 2020 September 6, 2020 Author ई- फारवेष्ट
काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा बस्ने एक नेपालीले गज्जबको उपयोगी एप विकास गरेका छन् । काठमाडौं नैकाप घर भएका प्रकाश मालाकारले सबै सेवा एउटै एपबाट दिन मिल्नेगरी ‘अल ईन वान’ मोबाइल एप तयार पारेका हुन् । उनले तयार पारेको ‘मालाकार’ एप गूगल प्ले स्टोर तथा आईओएस एप स्टोरमा सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायकहरुका लागि […]
आहा ! कति राम्रो संस्कार, हात धोएर भित्र आउ
होम आइसोलेसनमा बसेकी कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु
Posted on August 31, 2020 August 31, 2020 Author ई- फारवेष्ट
Posted on May 6, 2021 May 6, 2021 Author ई-फारवेष्ट.com
नासाका अन्तरिक्ष यात्री सकुशल पृथ्वीमा अवतरण।
Posted on August 3, 2020 August 3, 2020 Author ई-फारवेष्ट.com